Meteorology na Net bụ weebụsaịtị wepụtara iche na mgbasa nke Meteorology, climatology na sayensị ndị ọzọ metụtara ya dị ka Geology ma ọ bụ Astronomy. Anyị na-agbasa ozi siri ike banyere isiokwu na echiche dị mkpa dị na ụwa sayensị ma anyị na-eme ka ị nweta akụkọ kachasị mkpa.
Ndị otu nchịkọta akụkọ nke Meteorología en Red bụ nke otu ìgwè hiwere ndị ọkachamara na meteorology, climatology na sayensị gburugburu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Gụsịrị akwụkwọ na sayensị gburugburu ebe obibi na Master na Mmụta gburugburu ebe obibi na Mahadum Malaga. Amụrụ m meteorology na climatology na agbụrụ m na-abụkarị onye nwere mmasị na igwe ojii. Na blọọgụ a, m na-anwa ibunye ihe ọmụma niile dị mkpa iji ghọta ụwa anyị na ịrụ ọrụ nke ikuku. Agụọla m ọtụtụ akwụkwọ gbasara ihu igwe na ihe omimi nke ikuku na-anwa ijide ihe ọmụma a niile n'ụzọ doro anya, dị mfe ma na-atọ ụtọ.
Abụ m ọkà mmụta banyere ala, Nna-ukwu na Geophysics na Meteorology, mana karịa ihe niile m na-anụ ọkụ n'obi banyere sayensị. Onye na-agu akwukwo ihe omuma nke sayensi dika Science or Nature. Emere m oru na seismology nke Volcanic ma sonye na omume nyocha mmetụta gburugburu ebe obibi na Poland na Sudetenland na Belgium na Oké Osimiri Ugwu, mana gafere usoro enwere ike, ugwu mgbawa na ala ọma jijiji bụ mmasi m. Onweghị ihe dịka ọdachi ndị na-emere onwe m ka anya m meghee ma debe kọmputa m ọtụtụ awa ịgwa m maka ya. Sayensị bụ ọrụ m na agụụ m, ọ dị mwute, ọ bụghị ọrụ m.
M tolitere n'ime ime obodo, na-amụta site na ihe niile gbara m gburugburu, na -emepụta ụdị ebumpụta ụwa n'etiti ahụmịhe na njikọ ahụ na okike. Ka afọ na-aga, enweghị m ike ijikọ ma nwee mmasị na njikọ ahụ nke anyị niile na-ebu n'ime anyị na ụwa nkịtị.
Aha m bụ Antonio, enwere m ogo mmụta na Geology, Master in Civil Engineering etinyere na Ọrụ Obodo yana Nna-ukwu na Geophysics na Meteorology. Arụrụ m ọrụ dịka ọkà mmụta banyere mbara ala na dịka onye edemede akụkọ banyere ala. Emechaala m nyocha nke micrometeorological iji mụọ omume na ikuku na ala CO2. Enwere m olile anya na m nwere ike itinye ntụ nke aja m ka ọ bụrụ ụdị ọzụzụ na-enye obi ụtọ dịka ihu igwe na-erute onye ọ bụla nso.